परम्परागत अर्थतन्त्रमा बाँचेको देश - HongKong Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: ६:०७:०४
नेपालको अर्थव्यबस्थामा नखोतिलएको एउटा पक्ष परम्परागत अर्थतन्त्र पनि हो । अर्थवेत्ता, अर्थशास्त्री देखि श्रम विज्ञहरु देशको आर्थिक हालतलाई लिएर समय समयमा निराशाजनक टिप्प्णी गर्छन् । देशका अर्थमन्त्री जहिले पनि ढिकुटी रित्तो भएको स्वेतपत्र देखाउँछन् । तैपनि देश चलि रहेको छ । कसरी देश चलेको छ ?छलफल गर्ने पर्ने विषय भएर आएको छ ।
विश्वव्यापीकरण, वित्तिय सन्तुलन र व्यापार घाटा जस्ता शव्दावली प्रति नेपालीहरु धेरै अभ्यस्त नै छन् । हुन पनि हो विश्व बैक र अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको डिजायनमा व्यापार घाटालाई समायोजन गर्न नेपाली श्रमिक विदेश पठाउने योजना राज्यले बनाएको छ । हामी नेपाली जनता यसको सफल कार्यन्वयनको पक्षमा सडकमा नारा लगाईरहेका छौ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल कहाँ छ भनेर विश्लेषण गर्न जहिले पनि चुक्ने गरेका छौ । हाम्रो अर्थव्यबस्थाको इतिहास यही हो ।
धेरैले यो देश पशुपतिनाथले चलाएको भनेर व्यङ्ग्य मिश्रित आम धारण छ । हुन पनि हो देशमा कल कारखाना छैन, उद्योग धन्धा चौपट छ । त्यस माथि भूकम्पले थङ्थिलो बनाएको देशमा कोरोना महामारीबाट उन्मुक्ति पाएका नै छैनौ । देशको सबै भन्दा ठूलो रोग भ्रष्ट्राचारको हो । जनतालाई भनेर विनियोजन गरेको बजेट धेरै ठाँउमा चुहिदै थोपा पनि जनतालेपाउँदैनन् । यस्तो देशमा समृद्धि सपना केवल ’साधुको सात– जस्तै हुन्छ । यही चित्रलाई हेर्दै नेपाली बीरहरु आप्रवासनको संसारमा हराएका छन् । उनीहरुको कर्मशील सीप त्यतै विलाएको छ । तैपनि देश चलि रहेको छ । के साच्चि नै यो देश पशुपतिनाथ कै आशिर्वादले चलेको हो ? विचारणीय प्रश्न छ ।
एन्टोनेटने हेल्मर जस्ता विश्लेषकहरु आर्थिक गतिविधि विना पनि अर्थतन्त्र सुचारु रहनुको अर्थ परम्परागत अर्थतन्त्रसंग जोड्न चाहन्छन् । खास गररे जहाँ आदिवासीहरुको अधिक उपस्थिति छ त्यहाँ उनीहरुको ज्ञान, भूमिसंगको सम्बन्ध र जीवनशैलीले अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन्छ । यस पाटोबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्न सकेको खण्डमा हामीलाई निराशा हैन, उत्साह र आसा जगाउँन सक्छ ।
परम्परागत अर्थतन्त्रमा आदिवासीको मूख्य भूमिका हुन्छ । उनीहरुको अर्थतँत्र निर्वाहामूखि त हुन्छ तर त्यहाँ जीविकाको विशिष्ट ज्ञान, सीप र परम्परागत पेसा हुन्छ । बर्षोको अभ्यास र अनुभवबाट विकास भएको यस्ता ज्ञान र पेसााहरु पूस्तान्तरणका माध्यमले कतिपय भूक्षेत्रहरुमा अहिले पनि अभ्यासमा रहेको छ । आदिवासी विज्ञ मोसेस तोयुकु भन्नु हुन्छ ‘आदिवासीको यही निर्वाहामूखि अर्थतन्त्र उनै उनीहरुको जीवन शैली हो । जसको हिसाव किताव राज्यले गरेको हुँदैन ।’
आदिवासीकोजीवनशैली उनीहरुको विशिष्ट साँस्कृतिक चालचलनबाट निर्देशित शुन्छ । आदिवासीको जीवनशैली सामुहिकतामा आधारित हुन्छ । सामुहिक निर्णयका लागि आदिवासीहरुको प्रथाजनित संस्था, कानुन, परम्पराहरु अभ्यासमा हुन्छन् । केही स्थानमा यस प्रकारका परम्परागत संस्थाहरु लोप भएको भएता पनि साँस्कृतिक मान्यता, प्रचलित मान्यता, आध्यात्मिक आस्थाका आधारमा सामुहिक सहयोगात्मक भावनाको विकास गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि आदिवासी तामाङ समाजमा कुनै पनि सामुहिक क्रियाकलापमा सघाउनी लैजाने चलन छ । यो एकै परिवारलाई ठूलो आर्थिक बोझ नपरोस भनेर यस्तो परम्परा सुरु गरिएको हो । यस्तै गरी आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू) समाजमा विवहामा सघाउनी लैजाने परम्परा छ । यस्को आफनो नियम हुन्छ । कुनै क भन्ने व्यक्तिको छोरा र छोरीको बिहेमा ख भन्ने व्यक्तिले मानौ रु एक सय र एक बोतल रक्सी सहयोग लगेको भए ख भन्ने व्यक्तिको छोरा वा छोरीको बिहेमा दुईसय लैजानु पर्छ । यो प्रचलन सबै लिम्बू गाउँमा छ । यो सहयोगात्मक सामुहिक कदम हो । यसरी नै पर्म प्रथा आदिवासीको श्रमसंग सम्बन्धित अर्को मौलिक सामुहिकताको ढाँचा हो । आदिवासी छन्त्यालहरुमा ग्वार प्रथा, हुड्डा, भाइसारियो पठाउने परम्परा छ । यो सबै परम्परागत अर्थतन्त्रसंंग सम्बन्धित परम्परा हो ।
आदिवासीहरुले आफनो परम्परागत समाजलाई सुव्बस्थित बनाउन र परम्परागत अर्थतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन पेशा तथा व्यबसायसंग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रथाजनित परम्पराहरु बनाएका हुन्छन् । पर्म प्रथा, ढिकुर प्रथा, ग्वार प्रणाली लगायतका परम्पराहरु उनीहरुको आर्थिक जस्वनसंग सम्बन्धित छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रकासित आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासको अवस्था नामक विवरण पुस्तकका अनुसार १४ वटा प्रथा र परम्परा त्यस प्रदेशमा प्रचलित छन् । यी मध्ये अधिकाँश परम्परा आर्थिक तथा श्रम संग सम्बन्धित छन् । विभिन्न जातीहरुको जन्मदेखि मृत्युसम्मका यस्ता संस्कारहरुले समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्र निर्माणमा अहंम् भूमिका खेल्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । गण्डकी प्रदेशका गुरुङ समुदायको ‘हुर्रे र आमा समूहको प्रथा’, थकाली समुदायको ‘ढिकुटी प्रथा’, नेवार समुदायको ‘गुठी प्रथा’, किरात समुदायको ‘किपट प्रथा’ र प्रायः सबै समुदायमा प्रचलित ‘अनिवार्य झारा प्रथा’, ‘धर्म भकारी प्रथा’, ‘ऐंचो पैंचो प्रथा’, ‘भारा पर्म’हरु छन् ।
आदिवासीहरु बिशिष्ट सीप भएका र ती सीपलाई आफनो पेसा व्यबसाय बनाउने समुदाय हुन् । आदिवासीको सीप तथा परम्परागत पेसा आफु बसेको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र अनुसार फरक फरक हुन्छन् । साझा रुपमा भन्नु पर्दा उनीहरुको परम्परागत पेसा प्रकृतिक स्रोत र साधानमा निर्भर हुन्छन् । मानव विकासको क्रममा आदिवासीहरुको विकाससंगै परम्पराबाट सिकेको यस्ता सीपहरु अहिले पनि आफनो पहिचान र परिचयका रुपमा निरन्तरता दिईरहेका छन् । उदाहरणका लागि अहिले पनि घुमन्ते र फिरन्ते जीवन बिताईरहेका राउटेहरु काठजन्य सामाग्रीहरु बनाएर अन्नसंग विनिमय गर्ने गर्दछन् । कृषि तथा पुशपालन गर्ने आदिवासीहरु परम्परागत कृषि प्रणालीबाट विमूख बनेका छैनन् । हिमाली आदिवासीको चरण प्रणाली परम्परागत पशुपालनको एक उदाहरण हो । कृषियुगमा प्रबेश गरेसंगै अभ्यास गरेका खोरिया खेती प्रणाली, मिश्रित वाली प्रणाली छोडेका छैनन् ।
आदिवासीहरुमा पशुपालन प्रमूख पेसा भन्ने बिषयमा विवाद भएन । पसुपालनबाट मूल्य श्रृंखला कायम गर्ने सीप पनि छ । गाई, भैसी, भेडा, च्याँग्रा वा बाख्रा, चौरीबाट आउने आय भनेको दुध तथा उन हो । दुधलाई संकलन गरेर घिउ बनाउने, घिउलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने सीप उनीहरुसंग छ । आधुनिक चिज कारखानाको स्थापना नहुँदै पनि दधजन्य पदार्थबाट बन्ने परिकारको निर्माण गर्न उनीहरु सिपालु छन् । बजारबाट टाडा यस्ता पशुगोठ हुने भएकाले दुध बेच्ने चलन प्रायः आदिवासीमा थिएन । यसैले घिउ बनाउने ठेकी वा टोलङ चलाएर घिउ निकाल्छन् । दही वा मोहीको प्रयोग गरेर छुर्पी वा यस्ता दुधजन्य पदार्थको मूल्यश्रंखला कायम गर्दछन् । यो आदिवासीहरुको महत्वपूर्ण ज्ञान हो ।
भेडाको उन पशुपालनको अर्को दृेन हो । यस्तो उनलाई प्रसोधन गरेर राडी पाखी बनाउने सीप पशुपालक आदिवासीहरुमा हुन्छ । हुन भेडाको उनबाट राडी, पाखी बनाउने सीप गूरुङसमुदायको भन्ने गरिन्छ । यस्तो भेडापालक आदिवासी गुरुङहरुको संख्या धेरै भएकाले पनि यस्तो टिप्पणी भएको होला । तर पशुपालक प्रायः सबै आदिवासीमा यस्तो सीप हुन्छ ।
हिमाली आदिवासीहरु भोटे, गुरुङ लहेमी सिंसावा, व्यासी, सियार तथा वालुङहरुले यस्तो काम गर्न जान्दछन् । छन्त्याल महिलाहरु भेडाको उनको राडीपाखी, हादुला, काम्लो, र बाख्राको उनको घुम, टोपी बनाउँछन् । त्यस्तै आदिवासी ल्होमी सिंसावाहरुको मुख्य जिविकोपार्जनको सेत कृिष तथा पशुपालन हो । पशुपालनका साथै भेडाको उनबाट बिभिन्न किसिमका बस्त्रहरु बनाउने गर्दछन् । राडी, पाखी बुन्ने र यसलाई बेच्ने पनि गर्दछन् ।
आदिवासीहरु प्रकृतिसंग सम्बन्धित बन जंगलमा अति निर्भर समुदाय भएकाले बन जंगलको उत्पादनसंग उनीहरु परिचित छन् । बनका कन्दमूल, फलपूmल, सागपातहरुसंग उनीहरुको परिचय गाढा छ । उयनीहरु बनका कन्दमूल संकलनमा पनि सिपालु हुन्छन् । काठ तथा बाँसका विभिन्न सामाग्रीहरु बनाएर बस्तु विनिमय गर्ने उनीहरुको चलन हो । कृषि औजारहरु थोङ्वा, थोङ्च्या, नेक्सीङ, तोक्ची शोरा, चिबु ढि तारी जस्ता औजार प्रयोग गर्छन् । प्राकृतिक जडिबुटी संकलन गरेर बेच्ने र चामल, खोर्सानीसंग साट्ने कतिपय आदिवासीको प्रचलन नै छ । पहराबाट ढुंगा झिकेर , लोहोरा, खल, पुजाआजा, गर्दा चढाउने चन्दन, द्धोट्नृ चनौठा, जाँतो आदिवनाएर त्यसैका आधारमा गुजारा गर्ने आदिवासी पनि नेपालमा नै छन् । केही आदिवासीहरु जीवन निर्वाहका लागि ऐरा (शिकार) खेल्ने गर्दथे । यो प्रचलन नेपाल कै आदिवासीहरुमा पाइन्छ । कुसुन्डा, चेपाङ, राउटृहरुको जीवन गुजारा यसैमा हुन्छ ।
माछामार्ने, खोला तथा नदीमा जाल हाल्ने, भीर मौरीको मह संकलन गर्ने, हस्तकला, कपडा बुन्ने, माटाका भाँडा बनाउने, ढुंगाको सामान बनाउने, काठका सामान बनाउने परम्पर।ागत सीप भएका आदिवासीहरु अर्झ छन् । राजीहरु यसमा सिपालु छन् । बोटेहरु पानी बिना उनीहरुको जीवन चल्न नै सक्दैन । पानी सबै प्राणीका लागि चाहिन्छ तर बोटेहरु साँस्कृतिक र जिवकोपार्जनका लागि एक अन्तर सम्बन्ध भएको जाति हो । आदिवासी जनजातिहरु आत्म निर्भर समुदाय हुन् । आफनो कपडा आफै बनाउनेउनीहरुसंग सीप छ । यस मध्ये तान बुन्ने परम्परा एक हो । याक्थुङ (लिम्बु) जातिका महिलाहरुमा तान बुन्ने बिशिष्ट परम्परा छ । परम्पराबाट नै चल्दै आएको यो परम्पराबाट आफुलाई चाहिने सबै प्रकारको लुगा कपडा महिलाहरुले तान बुनेर तयार गर्छन् । लिम्बु याक्थुङ परम्पराका जानकार अमर तुम्याहाङका अनुसार तानबाट यस्तो कपडा तयार हुन्छ ।
याक्थुङहरु तानलाई मनुष्य जीवनको पर्याय र प्रतीकको रुपमा लिन्छन् । फिजाएको तानका डोरीलाई मृत्युसंग तुलना गर्दछन् । १४ औ शताव्दीमा धागो कात्ने मेसिन ९धजभभ०ि आविकार भएर औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम स्वरुप आधुनिक किसिमले उत्पादन सुरु हुनु पूर्ब याक्थुङमहिलाले तानमा बुनेको कपडाबाट नै उनीहरुले लगाउने लुगाफाटाको आपुर्ती गर्दथे ।
लिम्बु जातिको मौखिक इतिहास मुन्धुम अनुसार तानबुन्ने सीप लिम्बु महलिाहरुले युमा –परम्परागत धर्म) बाट पाएका हुन् । लिम्बुनी चेली र (थाक्कक) तान को सम्बन्ध परापूर्ब कालदेखि नै नै जोडिएको हो । युमामाङले किरात चेलीहरु मध्ये सबैभन्दा पहिले चेम्जोङ चेलीलाई थाक्केलुङमा तान बुन्न सिकाइएका हुन भन्ने जनश्रुती छ
लिम्बु आदिवासीमा मात्र नभएर प्रायः सबै आदिवासीको आफनो आफनो पहिचान जनितपोशाक छन् । ती सबै पोशाकहरु सम्बन्धित जातिहरुले आफै तयार गर्ने गरेको इतिहास छ । नेवारी समाजमा लगाइने महिलाको हाकु पटासी पुरुषको दौरा सुरुवाल इस्टकोट यो जातिको परम्परागत पहिचान हो । यस्तो कपडाहरु उनीहरु आफैले तयार गर्ने गर्दथे । अहिले भने प्रायः लोप भएर गएको छ । आयातित कपडाबाट यस्तो पोशाक बनाउने चलन छ ।
परम्परामा सबै कमडाहरु नेवारहरुले आफै तयार गर्दथे । घरमा तान, चर्खा राखेर कपडा बुन्ुन उनीहरुको पेसा मध्ये एक थियो । उपत्यकाका नेवारहरुले कपडा आफै तयार मात्र नगरेर अरु समुदायलाई पनि उपलव्ध गराउँथे । तनहुँस्थित दुम्सिपाखाका कर्ण बहादुर दरैको भनाइृमा उनीहरु कपास खेती गर्दथे र त्यो कपास उपत्यकाका नेवारहरुले भारीका भारी खरीद गरेर लैजान्थे । नेवारहरुले कपासलाई प्रसोधन गरेर घरबुना कपडा तयार गर्दथे । अहिले परम्पराका नाममा भक्तपुर लिवालीका सूर्यलक्ष्मी कोँजुले मात्र तान राखेर यो परम्परा धानेकी छन् । उननले उत्पादन गरेको हाकुपटासी उपत्यकामा खपत हुन्छ । ललितपुर र काठमाडौमा हाकुर्सि भनिन्छ भने भक्तपुरमा हाकुप्रासी भनिन्छ ।
हिमाली आदिवासी शेर्पा, ह्योल्मोले लगाउने बख्खु, दोचा पनि उनीहरु आफैले तयार गर्छन् । भेडाको उनबाट बन्ने बख्खु घाँटी देखि खुट्टासम्म लामो हुन्छ । चिसो स्थानमा बस्ने भएकाले उनीहरुले यो न्यानो कपडा परम्पराबाट प्रयोग गर्दै आएका छन् । हिमाली भेगका जातीहरुले लगाउने दोचा एक प्रकारको जुत्ता हो । भेडाको उनबाट बुनिेर बनाइने दोचा घुँडासम्म आउने हुन्छ । हाल यस्तो दोचा कपडा वा छालाको पनि बनाइन्छ । पहडी र हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने गुरुङर मगरको जातीय पोशाक भाङ्ग्रा अल्लोको धागोबाट बन्द छ । घरेलु तानबाट बुनिने यो कपडाबाट भाङ्ग्रा बनाउन घरेलु तान राख्ने चलन छ । यस्तो तानलाई साँस्कृतिक रुपमा पुजा गर्ने र आध्यात्मिक रुपमा पुर्खाको बरदानका रुपमा बिश्वास गरिन्छ । धिमाल आदिवासीको मौलिक पोशाक पेटानी पनि उनीहरु आफैले तयार गर्ने गर्दछन् ।
माथिको विवरणहरुबाट आदिवासी जनजातिहरू आत्मनिर्भर, स्वायत्त शासन गर्ने र स्वावलम्बी भएको प्रमाण दिन्छ । जीवन निर्वाह गर्ने क्रममा युगौको अभ्यास र अनुभवबाट सिकेका यस्ता परम्परागत आदिवासी ज्ञान र शीपहरु अहिले बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ । यस्ता ज्ञानको लोप हुँदा उनीहरूको जातीय पहिचानमा समेत चुनौती थपिएको छ । किनभने परम्परागत ज्ञान र सीप बिना आदिवासीले फरक पहिचान पाउन सक्दैन । र, परम्परागत अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएर देश समृद्ध पनि बन्दैन ।
इन्दिरा भट्टराई, बिराटनगर आफ्नै नाममा जग्गा पास गर्ने खुशीमा गदगद भएर विराटनगरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पुगेकी...
‘मान्छेलाई श्रम गर्दा जस्तो सुन्दर केही गर्दा देखिदैन ।’ यसो भनिरहँदा स्वयं श्रममा लीन भैरहेकी हुन्छिन प्रदेश नम्बर एक प...
रोशनी राई, उदयपुर बिश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका क्रममा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार...
डा. हेमराज कोइराला प्रतिकुल परिस्थितिलाई सामना गर्दा हाम्रो शरीरले व्याक्त गरेको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक प्रतिक्रिया...